“သံဃဿဒေမ”လို့ ပြောလှူတဲ့ အလှူရှင်များသိစေရန်” - Tameelay
“သံဃဿဒေမ”လို့ ပြောလှူတဲ့ အလှူရှင်များသိစေရန်”
“သံဃဿဒေမ”လို့ ပြောလှူတဲ့ အလှူရှင်များသိစေရန်
ဒကာကြီး ဒကာမကြီးတွေဘက်က သတိရှိဖို့လေးတစ်ခု ဘုန်းကြီးပြောချင်ပါတယ်..
ဆွမ်းလောင်းပြီးရင် သံဃာ့ဂုဏ်ရည်ကိုရည်ညွှန်းပြီး သံဃာတော်ဟူသော အမှတ်သညာဖြင့်လောင်းလှူရင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..
သို့သော် ပါးစပ်ကလည်း “သံဃဿ ဒေမ”ဆိုပြီး ဆိုလိုက်သေးတယ်..
“သံဃဿဒေမ”ဆိုတဲ့ပစ္စည်းသည် ဝိနည်းကြောင်းအရ ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ?..
ဝိနည်းဒေသနာတော်ဘက်ရောက်လာလျှင် အလှူရှင်နှုတ်က ပြောဆိုသောစကားသည်သာလျှင် ပမာဏဖြစ်တယ်..
အလှူရှင်က”သံဃဿဒေမ”လို့ပြောလှူလျှင် သူလှူလိုက်တဲ့ “သံဃဿဒေမ”က မုန့်လေးတစ်ပွဲပဲ..
အဲဒီမုန့်လေးတစ်ပွဲကို ရွာထဲမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် တစ်ဆယ့်နှစ်တောင်အတွင်းမှာ အခြားသံဃာမရှိသေးဘူးဆိုလျှင်
အဲ့ချိန်အခါမှာ အလှူခံရသောသံဃာက”ဤပစ္စည်းသည် ငါ့အားရောက်၏”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ရပါတယ်..
ဒီလိုဆိုလျှင် သူစားထိုက်ပါတယ်.. တစ်ဆယ့်နှစ်တောင်အတွင်းမှာ အခြားသံဃာက ရှိနေခဲ့လျှင်အဲ့ဒီသံဃာကို ခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုခဲ့ပဲ
ဒါက အာပတ်သင့်ရုံတင်မကဘူး အဲဒီမုန့်က ပါရာဇိကကျနိုင်လောက်အောင် တန်ဖိုးရှိခဲ့လျှင် ဒီရဟန်းတော်က အဲ့ဒီရဟန်းတော်က အဲ့ဒီနေရာတွင်ပင် ပါရာဇိကကျနိုင်ပါတယ်..
နောက်တစ်ခု ကျောင်းဝန်းအတွင်း”သံဃဿဒေမ”လို့ဆိုပြီး အလှူရှင်က လှူတယ်..
ဒါဆိုကျောင်းတိုက်အတွင်း သံဃာငါးရာရှိလျှင် ငါးရာလုံးကိုရတဲ့သံဃာက လိုက်ပြီးခွဲဝေရမှာဖြစ်တယ်..
ဖြစ်ပါ့မလား..စဉ်းစားကြည့်..ဘယ်ကိုယ်တော်က ဘယ်ကြွမှန်းမသိ သူလှူတဲ့မုန့်ကို အပုံငါးရာကျော်ပုံဖို့လည်း အချိန်ရှိဦးမလား..
အဲ့ဒါကြောင့် နည်းနည်းလည်းစဉ်းစားကြည့်..ဘယ်သူကများ သင်ပေးလိုက်လဲမသိဘူး..
ဒီအစဉ်အလာက ဆွမ်းလောင်းတဲ့အခါ “သံဃဿဒေမ”တဲ့..ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆိုလျှင်တော့ “ဒကာကြီးပြန်ယူသွား ဘုန်းကြီးမဝေနိုင်ဘူး”ဆိုပြီး ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်တယ်..
ဒါက သံဃာ့ဂုဏ်ကို အာရုံပြုပြီးသာ လှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်..”သံဃဿဒေမ”လို့ နှုတ်ကပြောဆို လှူဒါန်းရမယ့် လုပ်ငန်းခွင်မဟုတ်ပါဘူး..
“သံဃဿဒေမ”လို့ပြောဆိုလှူဒါန်းတဲ့ အခြားအခြားသောပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့လျှင်
သံဃာ့ရေးရာဘဏ္ဍာထိန်းတဲ့ဌာနကို ဝေဖန်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ပြောချင်တာက လှူဒါန်းတဲ့နေရာမှာ သတိတော့ရှိကြပါ.. ။
“သံဃ ဿ ဒမေ”လို့ ပွောလှူတဲ့ အလှူရှငျမြားသိစရေနျ
ဒကာကွီး ဒကာမကွီးတှဘေကျက သတိရှိဖို့လေးတဈခု ဘုနျးကွီးပွောခငျြပါတယျ..
ဆှမျးလောငျးပွီးရငျ သံဃာ့ဂုဏျရညျကိုရညျညှနျးပွီး သံဃာတျောဟူသော အမှတျသညာဖွငျ့လောငျးလှူရငျ ဘာမှမဖွဈပါဘူး..
သို့သျော ပါးစပျကလညျး “သံဃဿ ဒမေ”ဆိုပွီး ဆိုလိုကျသေးတယျ..
“သံဃ ဿ ဒမေ”ဆိုတဲ့ပစ်စညျးသညျ ဝိနညျးကွောငျးအရ ဘယျလိုဖွဈလာလဲ?..
ဝိနညျးဒသေနာတျောဘကျရောကျလာလြှငျ အလှူရှငျနှုတျက ပွောဆိုသောစကားသညျသာလြှငျ ပမာဏဖွဈတယျ..
အလှူရှငျက”သံဃ ဿ ဒမေ”လို့ပွောလှူလြှငျ သူလှူလိုကျတဲ့ “သံဃ ဿ ဒမေ”က မုနျ့လေးတဈပှဲပဲ..
အဲဒီမုနျ့လေးတဈပှဲကို ရှာထဲမှာဖွဈခဲ့မယျဆိုလြှငျ တဈဆယျ့နှဈတောငျအတှငျးမှာ အခွားသံဃာမရှိသေးဘူးဆိုလြှငျ
အဲ့ခြိနျအခါမှာ အလှူခံရသောသံဃာက”ဤပစ်စညျးသညျ ငါ့အားရောကျ၏”ဟု အဓိဋ်ဌာနျရပါတယျ..
ဒီလိုဆိုလြှငျ သူစားထိုကျပါတယျ.. တဈဆယျ့နှဈတောငျအတှငျးမှာ အခွားသံဃာက ရှိနခေဲ့လြှငျအဲ့ဒီသံဃာကို ခှဲခွားဝဖေနျမှုမပွုခဲ့ပဲ
ဒါက အာပတျသငျ့ရုံတငျမကဘူး အဲဒီမုနျ့က ပါရာဇိကကနြိုငျလောကျအောငျ တနျဖိုးရှိခဲ့လြှငျ ဒီရဟနျးတျောက အဲ့ဒီရဟနျးတျောက အဲ့ဒီနရောတှငျပငျ ပါရာဇိကကနြိုငျပါတယျ..
နောကျတဈခု ကြောငျးဝနျးအတှငျး”သံဃ ဿ ဒမေ”လို့ဆိုပွီး အလှူရှငျက လှူတယျ..
ဒါဆိုကြောငျးတိုကျအတှငျး သံဃာငါးရာရှိလြှငျ ငါးရာလုံးကိုရတဲ့သံဃာက လိုကျပွီးခှဲဝရေမှာဖွဈတယျ..
ဖွဈပါ့မလား..စဉျးစားကွညျ့..ဘယျကိုယျတျောက ဘယျကွှမှနျးမသိ သူလှူတဲ့မုနျ့ကို အပုံငါးရာကြျောပုံဖို့လညျး အခြိနျရှိဦးမလား..
အဲ့ဒါကွောငျ့ နညျးနညျးလညျးစဉျးစားကွညျ့..ဘယျသူကမြား သငျပေးလိုကျလဲမသိဘူး..
ဒီအစဉျအလာက ဆှမျးလောငျးတဲ့အခါ “သံဃ ဿ ဒမေ”တဲ့..ရငျးနှီးတဲ့သူတှဆေိုလြှငျတော့ “ဒကာကွီးပွနျယူသှား ဘုနျးကွီးမဝနေိုငျဘူး”ဆိုပွီး ရှငျးရှငျးပဲပွောလိုကျတယျ..
ဒါက သံဃာ့ဂုဏျကို အာရုံပွုပွီးသာ လှူဒါနျးရမှာဖွဈပါတယျ..”သံဃ ဿ ဒမေ”လို့ နှုတျကပွောဆို လှူဒါနျးရမယျ့ လုပျငနျးခှငျမဟုတျပါဘူး..
“သံဃ ဿ ဒမေ”လို့ပွောဆိုလှူဒါနျးတဲ့ အခွားအခွားသောပစ်စညျးဖွဈခဲ့လြှငျ
သံဃာ့ရေးရာဘဏ်ဍာထိနျးတဲ့ဌာနကို ဝဖေနျနိုငျရနျအလို့ငှာ ပို့ပေးလိုကျပါတယျ.. ဒီတော့ပွောခငျြတာက လှူဒါနျးတဲ့နရောမှာ သတိတော့ရှိကွပါ.. ။
သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြင်ဖော်ဖြစ်လာမယ့်သူတွေကို သူ့လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂရေဟမ်
အဆိုတော် ဂရေဟမ်ကတော့ သမီးချောချောလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ တခေတ်တခါတုန်းက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ယခုလက်ရှိမှာလည်း သမီးဖြစ်သူနဲ့အတူ အခွေတွေထွက်ရှိပြီး အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ သူကတော့ ဂရေဟမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမီးချောချောလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာမို့ မျက်ခုံးလှုပ်နေရမယ့် ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းရောင်ခြယ်ကတော့ လက်ရှိမှာ ဂီတလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ဖခင်နဲ့အတူ Wake Up Daddy အယ်ဘမ် …
ချမ်းမြေ့မောင်ချို ဆေးရုံပေါ်တွင် သီချင်းနားထောင်၍လေ့ကျင့်နေဟုဆို
Myanmar Idol Season3Grand final ပွဲစဉ်အတွက် ချမ်းမြေ့မောင်ချို ဆေးရုံပေါ်တွင်သီချင်းနားထောင်၍လေ့ကျင့်နေဟုဆို ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရသော ချမ်းမြေ့မောင်ချိုအနေဖြင့် မနက်ဖြန် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် Myanmar Idol Season3Grand final ပွဲစဉ်အတွက် ဆေးရုံပေါ်တွင်သီချင်း …
မန္တလေးက ကောင်မလေးကို V Day လက်ဆောင် ကိုယ်တိုင်သွားပေးခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
မန္တလေးက ကောင်မလေးကို V Day လက်ဆောင် ကိုယ်တိုင်သွားပေးခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် စိုင်းစိုင်းကတော့ Valentine နေ့လေးမှာ ပရိသတ်တွေကို အံ့သြအောင် လုပ်လိုက်ပါပြီ။ စိုင်းစိုင်းက Valentine နေ့လေးမှာ Valentine လက်ဆောင်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ သူသွားပေးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးက ရန်ကုန်က မဟုတ်ပါဘူး …